Prof. U Ko Ko – Healthy Life Journal
ဆီးချိုသမား . .ကြားဖူးတာတွေမှန်ရဲ့ လား . . .
—၊ ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊— Q. ဆီးချိုရှိသူတွေက ကြက်သားနဲ့ သံပရာသီးအများကြီးနဲ့ ပေါင်းစားရင် ဆီးချိုကျတယ်၊ ဆေးသောက်စရာတောင် မလိုကြဘူးလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ထားကြပါတယ်။ အဲဒါက မှန်ပါသလား။ A. ဒါမျိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
—–၊ ပါမောက္ခဒေါက်တာဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကြို့ထိုးတာက ဘာကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ မကြာခဏ ကြို့ထိုးတာက ရောဂါဝေဒနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိတတ်ပါသလား။ ကြို့ထိုးတာ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ ရပါသလဲ။ A. ကြို့ထိုးတယ်ဆိုတာက ရင်ဝမ်းတားကြွက်သားက...